Iintloko ezimbini zoLungiso lweeNtloko eziPhumayo zokwenza iCombo kunye neFektri | Saselux
Ukusetyenziswa kwamandla: 1.2W max.
Iziphumo: 3W MAX
Lobukhulu: 400 * 182 * 45mm
① [Uludwe oluMiselweyo lwase-US] I-combo yokuphuma engxamisekileyo yokukhanya ekhanyayo ipasile isiqinisekiso se-UL. Inaliti ebunjiweyo yezindlu ze-ABS, ul-94V-0 umlinganiso welangatye, ongatshiyo. Ibe sisindisi sobomi xa kukho ukusilela kombane, umlilo, iimeko zemozulu ezimbi okanye ezinye iintlekele. Iqhosha lokuvavanya kunye nesalathiso sentlawulo bavavanywe ngokungqongqo.
② [Ixesha lokuphila kunye nokuKhanya] Ubomi beli phawu lomqondiso ophumayo ziiyure ezingama-50000. Ibhetri yogcino esetyenzisiweyo kolu phawu lwangaphandle olungxamisekileyo inokugcwaliswa kwakhona amaxesha angama-300 kwaye isebenze kangangemizuzu engama-27000 ubuncinci. Yonke intlawulo epheleleyo inokuhlala ngaphezulu kwemizuzu engama-90. Izibane zentloko zale mveliso zinokujikeleziswa kwicala olifunayo. Kwaye intloko nganye ene-SMD ekhanyayo, inokukhanyisa i-100 paces kude. Kufanelekile ukuba kufumaneke indawo emanzi engaphakathi, kodwa ingekho manzi.
Install [Fakela ngokulula] Le combo inokuxhonywa eludongeni okanye eluphahleni. Siza kuzilungiselela zonke izixhobo zofakelo.
④ [Umgangatho ophezulu] I-combo ephumayo engxamisekileyo yenziwe nge-injection-molded thermoplastic ABS housing. Ayizukuguga emva kweminyaka emininzi. Zonke iinxalenye zemveliso ziya kutshekishwa ngaphambi kokuthunyelwa. Iqhosha lokuvavanya kunye nesalathiso kuvavanyiwe amaxesha angama-2000.
⑤ [Inkonzo] Inkonzo ye-OEM:
♥ Ilogo yoshicilelo kwimveliso
♥ Imveliso yomzimba ngokwezifiso umbala
Ibhokisi eyenziwe ngokwezifiso (ukupakisha)
♥ Umbala wokukhanya okwenziwe ngokwezifiso
Yonke le nkonzo ingentla iya kuvelisa iindleko ezongezelelweyo. Iindleko ziya kwahluka ngokobungakanani beodolo kunye neemfuno zokwenza ngokwezifiso. Ukuba ubungakanani beodolo yakho bukhulu ngokwaneleyo, oku kuya kuba simahla.
Egqithileyo I-LED engxamisekileyo yokuPhuma kwezibane zeCombo
Okulandelayo: Ukukhanya kweMotion Sensor Ukukhanya kweNdonga ye-IP65
Black Led Phuma Sign Nge Izibane Emergency
Commercial Led Emergency Uphumo Sign
Amacala aphindwe kabini akhokele ukuPhuma ngokuNgena
Iimpawu eziPhezulu zokuPhuma kwezibane eziPhezulu
Led Emergency Phuma Sign
Led Emergency Exit umThumeli ngaphandle
Umthengisi woPhumo oPhuma ngokuNgxamisekileyo
Iimpawu zoPhumo eziNgxamisekileyo
Red Led Phuma Sign Nge Izibane Emergency
Ileta ebomvu ebomvu ukuphuma kwezibane
Uluhlu lwe-Ul Light Light / Exit Light